Global Voices teny Malagasy » Hiady hevitra Momba Ny Lalàna Mandrara Ny Tomboka Vatsa Amin’ny Lamosin’ny Vehivavy Ireo Mpanao Lalàna Rosiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Oktobra 2014 10:38 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Tantely
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Hiady hevitra  tsy ho ela ny fidirany manaraka amin'ny fiainan'ireo olom-pirenena ny parlemantan'i Rosia: manery ireo toerana fametrahana tomboka vatsa amin'ny vatana mba hampitandrina ireo vehivavy, fa mety hampidi-doza ny ranomainty eo amin'ny faritra ambanin'ny lamosin'izy ireo amin'ny fanindromana fanadontoana ny taola-maojany mandritra ny fiterahana. Natao ho toy ny fehezan-dalàna mba hiarovana ireo mpanjifa ilay volavolan-dalàna , izay eritreretin'ny Domà horesahina anio, 10 Oktobra, saingy maro—raha tsy ny ankamaroan'ny Rosiana—no toa mandray izany ho zavatra nivoaka farany anatin'ireo karazanà lalàna maro entina hamerana ny fitondran-tena heverina ho tsy mendrika. Vao maika nihamafy ny fihetsik'ireo olona nanoloana izany, satria maro ireo filazam-baovao Rosiana no mandika vilana  ilay hevitra ho ezaka entina handraràna tsotra izao ny fametahana tomboka vatsa eo amin'ny faritra ambanin'ny lamosin'ireo vehivavy.
Anatin'ireo zohin-tsikera ao anaty Aterineto, anatin'ireo sehatra fiadian-kevitra sy ny media sosialy izay tsikaritra fa anjakan'ireo lehilahy, dia mirona kokoa amin'ny resaka bika ny adihevitra momba ireo tomboka vatsa amin'ny faritra ambanin'ny lamosin'ny vehivavy, fa tsy dia mankany amin'ny resaka ara-pahasalamana loatra. Manoratra i Aleks3 ao amin'ny fametrahan-kafatry ny Vott.ru  fa “Tsara endrika kokoa ny fitombenana mahafatifaty kely tsy misy ireny karazana sary lokoina ratsy be ireny,” raha mametraka rohy mankany aminà sary ahitàna ny valahan'ireo vehivavy, ny iray misy tomboka vatsa, ary ny iray natoraly. Nanasa ireo mpamaky izy “Hijery ny fahasamihafàna”.
Nanambara ny lehilahy tanora mahafinaritra iray hafa, izay mampiasa ny anarana “Fosnet” ao amin'ny vohikala Vott.ru, ary mazava ho azy fa manohana ireo ezaka entina hifehezana ny fametahana tomboka vatsa eo amin'ny fitombenan'ny vehivavy, fa “efa porofo iray mampiseho ny tsy fahatomombanana ara-tsaina ny fametahana tomboka vatsa eo amin'ny vody. Zavatra sarotra ampiana amin'izany ny fiterahana.”
Nizara ny fandrakofany ny tantaran'ilay tomboka vatsa tao amin'ny “Vkontakte”, izay tambajotra sosialy anaty Aterineto malaza indrindra any Rosia nametrahan'ireo mpampiasa fanehoan-kevitra maherin'ny 200 isa eo ho eo , ny RT amin'ny teny Rosiana. Mbola avy tamin'ireo lehilahy ihany ny ankamaroan'ireo valinteny, izay ny tena manahirana azy ireo dia ny lafiny mampanorisory ity tomboka vatsa eo amin'ny faritra ambanin'ny lamosin'ny vehivavy ity eo amin'ny sehatra ara-nofo. Manoratra i Alexey Maslov hoe “heveriko fa ireo mpivaro-tena sy vehivavy ratsy fitondran-tena no ahitàna tomboka vatsa tahaka ireny, izay, araka ny fomba fiainany, dia tsy tokony avela hanan-janaka akory, satria hiteraka olona mitovy aminy ihany avy eo”, talohan'ny nanampiany hoe “Mety diso aho angamba.”
Nahasahy nampiatrika an'i Maslov tamin'ilay fanotaniany hoe :” Nahoana ianao no misaina toy izany?” i Tatiana Seminchenko, vehivavy tanora iray mipetraka ao Krasnodar. Namaly izy [Maslov] fa avy amin'ny “tetikasa maneran-tany” avy any Eorôpa, “miaraka amin'ny firehana mamoafady ara-nofo sy ny fanambadian'ny mitovy fananahana” ireo tomboka vatsa amin'ny vehivavy ireo.
Tsy zava-baovao—na ao Rosia na any an-kafa—ny fizahozahoan'ny lehilahy sy ny fankahalàna ny fifankatiavan'olon-droa mitovy fananahana, saingy sarotra ny minia tsy hijery fa miaraka tanteraka amin'ny firehana manohitra ny fiovàna ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ilay ezaka vaovaon'ny Domà mba hiarovana ireo vehivavy amin'ny tomboka vatsa.
Raha miketrika fanajanonana vodivodiana ny fifampitifirana ny fifandirana misy ao Okraina Atsinanana, dia mety mieritreritra ny hiverina amin'ny politika talohan'ny ady, momba ny fanafintohinana ara-pitondrantena ireo mpanao lalàna Rosiana. Talohan'ny niadian'i Moskoà tamin'ireo “fascistes” nipetraka tao Kiev, dia nandany taona maro izy niaro ireo Rosiana tamin'ireo raiamandreny mpamahana avy any ivelany izay masiaka loatra, sy ireo resaka ara-nofo mampiahiahy. Mety hahafaly tokoa ny ampahany maro amin'ny vahoaka izay efa mahatoha ny “tetikasa iray manontolo” avy any Andrefana ilay volavolan-dalàna mandrara “ny fametahana tomboka vatsa amin'ny fitombenan'ny vehivavy”, izay lazaina fa noho ny resaka ara-pahasalamana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/13/64866/
 Hiady hevitra: http://www.rg.ru/2014/10/08/vred.html
 mandika vilana: http://znak.com/urfo/news/2014-10-09/1029662.html
 fametrahan-kafatry ny Vott.ru: http://vott.ru/entry/320625
 fanehoan-kevitra maherin'ny 200 isa eo ho eo: https://vk.com/wall-40316705_4038354